Mila mitondra ny hazo fijaliantsika isan’andro isika
"Raha misy ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany isan'andro ka hanaraka Ahy." - Lio. 9:23
Ny herin'ny Hazo fijaliana irery ihany no afaka manafaka ny olombelona amin'ny fanagejan'ny ota. Nanao sorona ny tenany mba hamonjena ny mpanota i Kristy. Ireo izay voavela heloka sy tia an'i Jesôsy dia hiray Aminy. Mitondra ny ziogan'i Kristy izy ireo. Tsy natao hanembantsembana azy ireo na koa hahatonga ny fiainana-pivavahany ho asa mafy tsy manome fahafaham-po anefa izany zioga izany. Tsia, fa ny ziogan'i Kristy no fitaovana mety indrindra hahatonga ny fiainana kristianina ho feno fahafinaretana sy fifaliana. Ny Kristianina dia tokony ho feno hafaliana rehefa mibanjina izay nataon'ny Tompo ho azy tamin'ny nanolorany ny Zanani-lahy Tokana ho faty hamonjy izao tontolo izao "mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay".
lreo izay mijoro eo ambanin'ny faneva voa pentin-dran' Imanoela zanak'andriana dia tokony ho miaramila mahatoky ao amin'ny tafik'i Kristy. Tsy tokony hivadika mihitsy isika na hanao ny tsy marina. Maro amin'ireo tanora no hilatsaka an-tsitrapo hiaraka amin'i Jesôsy Tompon'ny aina. Kanefa raha ny hijoro hiaraka Aminy hatrany dia tsy maintsy mijery an'i Jesôsy mandrakariva izy, Ilay Kapiteniny, ka miandry ny baiko avy Aminy. Tsy afaka ny ho miaramilan'i Kristy izy ireo no sady miombona koa amin'i Satana sy ny momba azy, raha izany mantsy dia ho fahavalon'i Kristy izy ireo ary mivadika amin'ilay toky masina - Y1, 30 Martsa 1893.
Natao asandratra sy entina tsy am-pimonomononana na am-pitarainana ny hazo fijaliana (...) Amin'ny fanandratana azy dia ho tsapanao fa manandratra anao koa izany. Ho hitanao fa velona hazo fijaliana izany, feno famindram-po sy fitiavana mangoraka. - L,1.145,1
Ny fitondrana ny hazo fijaliana eo amin'ny fiainanao dia ahafahanao manambara hoe: "Tantatro fa veloma ny Mpanavotra ahy', ary satria velona Izy dia ho velona koa aho". Toky manao ahoana re izany! - Ms, t. 85, 1901.